Adaamaa: Jeequmsa warri ABIN kasiteen dubbiin badaa jira. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAdaamaa: Jeequmsa warri ABIN kasiteen dubbiin badaa jira.
Adaamaa ganda 11 keessatti jeequmsa warri ABIN kasiteen dubbiin badaa jira.Lubbuun namaas darbeera.
#ADAAMAA: Bara Adaamaatti HABASHAANONNII Moote.
Bulchiinsi #Shimallis Abdiisaafi Addisu Arega Kitessa oolee osoo hin bulin ifatti muldhataa jira. poolisiin oromiyaa adaamatti kashlabboota #ABNiin tumam’tee oolte. Abdiin ummataaf qeerroo oromoo bulchitoota kanniinii??
Opdon muktaar kadir deebitee jirtii dhagahaa wal dhageessisaa. Biyya keenya irratti harcaatuun minilik ABN poolisii oromiyaa tumte. Tumte jechuun salphaa fakkaataamii? Namni du’es iftoominaan ni jira jedhamaa jira.
Adaamaatti warri ABN fi G-7 paartiin Amaaraa Foolisoota Oromiyaa reebaa jiru jedhan
Sanyii warra Kuulloo sanaaf
PM #AbiyAhmed has appointed the following 4 officials:
Teyiba Hassen- Social Sector Advisor to the PM
Alemu Sime- Deputy Dir. Gen., #METEC
Jantirar Abay- Infrastructure & Urban Dev’t Advisor to the PM
& Gezahegn Abate- Deputy Dir. Gen, Ethiopian Hotel & Tourism Training Inst’t pic.twitter.com/nWIy4oiJU4
— Addis Standard (@addisstandard) April 22, 2019
OMN: Ilaa fi Ilaamee ,Haala yeroo irratti marii Dr. Ittaanaa Habtee https://t.co/vNce6hjLbl pic.twitter.com/WVS5HozPZz
— Kichuu (@kichuu24) April 22, 2019
Sagantaan Addisu Arega Kitessa, #Shiimallis_Abdiisaa Kibxata borii gara Arsii (Asallaa) deemuudha. Namni madaa Aannoleetti qoose maal barbaacha Oromiyaa keessa adeema? @Addisu Arega Kitesa tasumaa deemuu hinqabu, Shiimallis deemu malee yoojedhe #Siidaa_Aannolee daawwatee ililii ulfina gootota Aannolee agarsiisu jala kaa’uu qaba